1 Indlela yokusebenzisa FaceTime ku-iPad – thwebula FaceTime iPad FaceTime ku-iPad ayisebenzi
2 FaceTime kwi-iPad:
3 Ultimate Umhlahlandela Qala FaceTime ku-iPad:
4 Vula Face Time Isici ku Mina lakho Pad:
5 Sebenzisa Face Time Call On-iPad:
5.1 Chofoza isithonjana Face Time:
5.1.1 Thola Kudingeka lakho Imininingwane:
6 Imininingwane Imininingwane Panel
6.0.1 Beka isiqophi noma ikholi umsindo naye okhethiwe:
6.1 Okuningi kusuka kusayithi lami
Indlela yokusebenzisa FaceTime ku-iPad – thwebula FaceTime iPad FaceTime ku-iPad ayisebenzi
Landa i-Fac isikhathi se-iPad
Apple ilethe kangcono amakhasimende ayo njalo. It has njalo ukugcizelela ukuqalisa labo izinhlelo zokusebenza noma isofthiwe ungaletha injabulo futhi lula amakhasimende ayo. Umthelela zokuxhumana uye kakhulu iyakhula.
FaceTime thwebula for ipad
FaceTime for android-iPad
FaceTime lwe-thwebula iPad
Abantu zonke ubudala ufuna uhlale ehambisana nomunye. Ngenxa yale njongo, Apple eziklanyelwe a videotelephony lokusebenza fabulous uyazi njengoba FaceTime amakhasimende ayo.
Lolu hlelo lokusebenza kuphela yakhelwe kubo bonke abasebenzisi Apple usebenzisa iPhone, Mac, iPod, ne-iPad. Phakathi kwabo bonke labo namanye amadivayisi we-Apple, abantu abathanda ukusebenzisa iPad. isikrini sayo ebanzi nabahle izinga yi ukuvumela amakhasimende ukujabulela izici zayo kanye zokusebenza ngokuphawulekayo njengoba kuqhathaniswa namanye amadivayisi.
Ungasebenzisa FaceTime ku-iPad ukuba sibe nombono ebanzi ikholi yevidiyo yakho. Lesi sihloko uzokutshela ngokujulile ukubaluleka, ukulandwa, ukufakwa, ukusetshenziswa, netimphawu Face Isikhathi iPad.
FaceTime kuyinto isiqophi amazing kanye alalelwayo Ukushayela kwezindlela lokusebenza ukuthi ekuqaleni esidalelwe iphone4, kodwa funa ephakeme ngikuphoqe Apple ukuze balenze litholakale kubasebenzisi iPad kanye. iPad ikunikeza izici ezihlukahlukene kodwa esinye sezici ezikhanga kakhulu wukuthi ungakwazi kalula beka isiqophi noma umsindo izingcingo ngokusebenzisa FaceTime.
Ungasebenzisa Face Yisikhathi sokuthi uthole oxhumene nomunye umsebenzisi onesifo-iPad ne-MAC OS 10.6.6 noma izinguqulo kamuva. Wena nje ukuthola lowo muntu ngokusebenzisa yayo-Id Apple. I ividyo ne-odiyo izingcingo ngokusebenzisa FaceTime baqiniseka khulula. Ungasebenzisa kwakho ku-inthanethi noma idatha yeselula ukuze uqale kokufaka izingcingo.
lokusebenza FaceTime empeleni ehlelelwe iOS abasebenzisi kuhlanganise iPhone, iPads, ngomakhalekhukhwini nama-iPod, ne-Mac. Lolu hlelo lokusebenza ikuvumela ukuba uhlale uxhumene uma wena kude nomkhaya wakho, abangane, ibhizinisi, nabasebenzi.
Uma ufuna ngokusebenzisa le videotelephony lokusebenza ophawulekayo iPad yakho, ke ungakhathazeki ungenawo ukwenza lutho. Apple isivele insiza FaceTime ku iPads yakho.
Udinga nje ID yakho Apple zokwenza lolu FaceTime lokusebenza olufakwe ngaphambilini iPads yakho. Lokhu kumelwe kube ezithakazelisayo ngawe ukwazi ukuthi uma une-iPad yakho, usukulungele ukwenza kwekhwalithi ephezulu yevidiyo noma umsindo izingcingo ngokusebenzisa FaceTime ngaphandle kanzima noma inqubo eside ukulandwa.
Ngosizo FaceTime ku iPads, ungakwazi kalula ukwenza noma wamukele isiqophi angenamkhawulo namakholi alalelwayo. Njengoba lolu hlelo kubasebenzisi be-iOS kuphela, ukuze ukwazi nje ukuthi ividiyo noma wefoni izingcingo kulabo basebenzisi abasebenzisa iPhone, Mac, iPod, ne-iPad amadivayisi. Ungakwazi ngqo ikholi kubasebenzisi iPad ngokusebenzisa imeyili yabo-id ukuthi ngokuvamile etholakala ohlwini contact.
Ultimate Umhlahlandela Qala FaceTime ku-iPad:
-iPad 2 noma kamuva ine Ikhamela eyakhiwe kusiza wena ukuqhuba amakholi wevidiyo ngokusebenzisa FaceTime. Lolu hlelo lokusebenza exhumana ikuvumela ukukhuluma obathandayo uma wena at kude nabo.
Ubuso Isikhathi ngokusebenzisa iPad ikunikeza zonke izici ovelele kodwa awukwazi ukulungisa ivolumu yalo kusukela uhlelo lwayo futhi awukwazi ukwenza okurekhodiwe izingcingo ividiyo yakho. kodwa namanje, inikeza zonke ezinye izici ewusizo ezenza kube ukuncintisana ukusebenzisa.
Vula Face Time Isici ku Mina lakho Pad:
Into ebaluleke kakhulu kuba, ngaphambi kokusebenzisa Face Time e iPads yakho, qiniseka ukuthi ozivulile olufakwe Face Time sici, ungakwenza lokhu nge:
Hamba kumenyu kulungiselelwa elitholakala kwi Ikhasinkomba ka-iPad yakho.
Khona-ke, chofoza isici Face Time ukuyivula kusebenze.
Ungase futhi ukulandela inqubo efanayo uma ufuna okwesikhashana uvale isici kusuka iPad yakho.
Esikhathini imenyu sokushona iPad yakho, ungase futhi ukhethe uhlu lwabo bonke oxhumana nabo ukuthi sewufuna exhumene ngokusebenzisa FaceTime. Ungenza lokhu ngokukhetha Amakheli e-imeyili yabo nama-akhawunti efonini.
Sebenzisa Face Time Call On-iPad:
Ungasebenzisa kuphela izincingo ngokusebenzisa FaceTime yakho kwabanye Apple abasebenzisi kudivayisi. Lokhu kusho ukwazi kuyasebenzisana ngokusebenzisa Face Time nabanye abasebenzisi abasebenzisa
-iPad 2 noma kamuva, noma
Mac egijima OS X 10.6.6 noma
iphone4 noma kamuva noma
Oyisizukulwane sesine-iPod touch noma kamuva
Ngaphambi ukushayela noma Apple abasebenzisi kudivayisi, qiniseka ukuthi Ungeze ukuba oxhumana ne-iPad. Ufaka ividiyo noma ikholi umsindo ngama-iPad yakho kulula awfully. Wena nje kufanele ulandele izinyathelo ezimbalwa okufaka.
Chofoza isithonjana Face Time:
Njengoba sekuchaziwe ngenhla, Ubuso Isikhathi isici olufakwe ngaphambilini iPads yakho. Ungathola kalula uphawu lwayo ku sasekhaya iPads yakho. Uma ngeke uchofoze isithonjana Face Time, ke ngeke akucele ukuba ukunikeza idatha edingekayo.
Wena kufanele ukungena id e-mail kanye nenombolo yocingo nge ufuna ukuqala ingxoxo bani. Ngemva kokufinyelela contact edingekayo, wena nje kufanele chofoza inkinobho elilandelayo.
Thola Kudingeka lakho Imininingwane:
Esikrinini eyinhloko uhlelo lwakho FaceTime, uzothola uhlu othintana ukuthi uzovela ohlangothini lwesokunene kwesikrini sakho. Lapho uzothola akhawunti womsebenzisi ofuna ukuxhumana, vele uchofoze igama lakhe.
Ngokuchofoza egameni lakhe, ungathola yonke imininingwane ebalulekile yalowo msebenzisi. Uhlu lukhombisa inani layo ekhaya, inombolo yeselula, ikheli le-imeyili kanye nezinye ukhetho njengokwaba contact, wengeze izintandokazi futhi uvimbele lo yomshayeli.
Imininingwane Imininingwane Panel
Beka isiqophi noma ikholi umsindo naye okhethiwe:
Uma kufinyelele ulwazi ukuthi umsebenzisi othile, wena nje ukugcina kwakhe noma inombolo yakhe noma i-imeyili- ikheli. Kumelwe sigcine iminingwane okuyinto inter-exhumene ne-Face Isikhathi kuphela.
Ngemva ukuvumelanisa idatha edingekayo, wena nje kufanele chofoza inkinobho yevidiyo noma ikholi alalelwayo. Futhi ungakwazi ukujabulela omunye isiqophi wayemthanda kakhulu kushayela amasevisi zomhlaba.
Yingakho Ngalokhu ulwazi kukusiza ukuba uqale futhi wenze FaceTime ku-iPad okuyinto umsebenzi olula ukwenza ngokwakho. Ngithemba imininingwane ekusizile ukuba uxhumane nabangani bakho kanye nemindeni. Do share with your friends and families so that they can also know the use of Face Time on iPad.
Ungayisebenzisa Kanjani i-Skype kudivayisi ye-Android